15.2.2020, Full time , Business Service
•	အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ (လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော Diploma တစ်ခုခု ရရှိထားသူ ဦးစားပေးမည်)၊
•	အသက် (၂၅) နှစ် မှ (၃၅) နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ပြီး Purchasing နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ (၂) နှစ် နှင့် အထက်ရှိသူ၊
•	အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအခြေခံရှိသူဖြစ်ပြီး Microsoft office, Internet & Email ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ၊
•	Purchasing Policies ကိုသိကျွမ်းနားလည်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူ၊
•	Inventories စာရင်းဇယား နှင့် ပတ်သက်သည်များကို ကျွမ်းကျင်စွာရေးဆွဲနိုင်သူ၊
Work location အမှတ် ၇၀-၇၂ ၊ (၉)လွှာ၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Company Industry: Procurement Supervisor
Global Grand Group of Companies (GGG) is one of the conglomerates of Republic of the Union of Myanmar and it has been formed up under the Myanmar Companies Act in August of the year 2011 existing with various subsidiaries which are going to implement different business activities. Global Grand Group (GGG) isadiversified business company, active inawide range of industries, including Trading, Services, Manufacturing, Hospitality Services, Development Projects and Joint Venture Endeavors. GGG’s headquartered in Yangon, Myanmar.Asatruly diversified business, GGG has more than 200 employees nationwide. There are three main pillars which support Global Grand Group’s long term goal: Organizational & Financial Reputation Diversity of Business Expertise & Talented Workforce Adopting Best Practices to Market with due Care to Environmental and Social Sustenance. While we hold onto business simple, easy to realize and focused on the strategic issues under work together, sharing ideas in an open, constructive style with encouragement on different backgrounds and styles of working and welcome diversity.
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး လူအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိသူ၊ •	ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းကောင်းမွန်ပြီး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်နိုင်သူ၊ လုပ်ငန်းအားဦးဆောင်နိုင်သူ၊
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး လူအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိသူ၊ •	Marketing Policy များချမှတ်ပြီး စီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်သူ၊ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းကောင်းမွန်သူ၊ Head of Marketing Department – Departmental Store
•	စာရင်းဇယား နှင့် ပတ်သက်သည်များကို သိရှိနားလည်သူ၊
•	ဝယ်ယူသူများအပေါ် စိတ်ရှည်ပြီး လိမ္မာယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆို၍ အရောင်းမြှင့်တင်နိုင်သူ၊ •	သွက်လက်ထက်မြက်ပြီး ရုပ်ရည်သင့်တင့်ရှိသူ၊
•	Microsoft office, Microsoft Execel, Internet & Email ကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနုိင်သူ။ •	စာရင်းဇယားနှင့် ပတ်သက်သည်များကို သိရှိနားလည်သူ။ Head Of Logistics (Purchasing)
Procurement Supervisor Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Global Grand Group of Companies Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Procurement Supervisor Jobs in Myanmar, jobs in Yangon